အရမ္း လန္းတဲ့ နန္းေမြစံ ရဲ႕ အၾကမ္းစား ဗီဒီယို ၾကည့္ၿပီးလား? – Let Pan Daily
အရမ္း လန္းတဲ့ နန္းေမြစံ ရဲ႕ အၾကမ္းစား ဗီဒီယို ၾကည့္ၿပီးလား?
ေမာ္ဒယ္လ္ နန္းေမြစံ ကေတာ့ လက္ရွိမွာ ေအာင္ျမင္လ်က္ ရွိေနတဲ့ ေမာ္ဒယ္လ္ေတြ ထဲမွာ တစ္ေယာက္အပါအဝင္ျဖစ္ၿပီး အႏုပညာအလုပ္ေတြကို လုပ္ကိုင္လ်က္ရွိေနကာ ေၾကာ္ျငာေတြကိုလည္း ႐ိုက္ကူးလ်က္ရွိေနသူေလးပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ အမိုက္စားဖက္ရွင္ေလးေတြကို ဝတ္ဆင္ေလ့ရွိတဲ့ သူမကေတာ့ မိန္းကေလး ပရိသတ္ေတြရဲ႕ ခ်စ္ခင္ အားေပးမႈေရာ ေယာက်ာ္းေလး ပရိသတ္ေတြ ရဲ႕ ခ်စ္ခင္အားေပးမႈကိုပါ အခိုင္အမာရယူထားႏိုင္ခဲ့တဲ့ ေမာ္ဒယ္လ္တစ္ေယာက္ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။
အမိုက္စား ပုံရိပ္ေလးေတြ ကို လူမႈကြန္ ယက္စာမ်က္ႏွာ ထက္ တင္ေပးေလ့ ရွိတဲ့ သူမကေတာ့ ပရိသတ္ေတြရဲ႕ ခ်စ္ခင္အားေပးမႈကို အခိုင္အမာရယူထားႏိုင္သူေလးပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ အမိုက္စားခႏၶာကိုယ္ေကာက္ေၾကာင္းအလွကို ပိုင္ဆိုင္ထားႏိုင္ခဲ့တဲ့ သူမကေတာ့ ပရိသတ္ေတြရဲ႕ အခ်စ္ေတာ္ေလးဆို ရင္လည္း မမွားပါဘူး။ သူမကေတာ့ ယခုမွာ အလန္းစား ဖက္ရွင္ ေလးေၾကာင့္ ဆြဲေဆာင္မႈရွိတဲ့ အလွတရားေလးေပၚလြင္ေနၿပီး အမိုက္စားပိုစ့္ေလးေတြေပးေနခဲ့ပါတယ္။
သူမရဲ႕ အသည္းယားစရာ ပုံစံေလးနဲ႔ လွပေနတဲ့ ပုံရိပ္ေလးေတြ ဟာ ပရိသတ္ေတြကို အခ်စ္ေတြပိုေစခဲ့တာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ခ်စ္ပရိသတ္ေတြအတြက္ ေမာ္ဒယ္လ္နန္းေမြစံရဲ႕ အမိုက္စားပုံစံေလးနဲ႔ ေႂကြေလာက္ စရာေကာင္းလြန္းတဲ့ ပုံရိပ္ေလးေတြကို ျပန္လည္ေဖာ္ျပေပးလိုက္ၿပီး အဆိုပါပုံရိပ္ေလးေတြကို ေအာက္မွာၾကည့္ႏိုင္ ပါတယ္။
အရမ်း လန်းတဲ့ နန်းမွေစံ ရဲ့ အကြမ်းစား ဗီဒီယို ကြည့်ပြီးလား?
မော်ဒယ်လ် နန်းမွေစံ ကတော့ လက်ရှိမှာ အောင်မြင်လျက် ရှိနေတဲ့ မော်ဒယ်လ်တွေ ထဲမှာ တစ်ယောက်အပါအဝင်ဖြစ်ပြီး အနုပညာအလုပ်တွေကို လုပ်ကိုင်လျက်ရှိနေကာ ကြော်ငြာတွေကိုလည်း ရိုက်ကူးလျက်ရှိနေသူလေးပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ အမိုက်စားဖက်ရှင်လေးတွေကို ဝတ်ဆင်လေ့ရှိတဲ့ သူမကတော့ မိန်းကလေး ပရိသတ်တွေရဲ့ ချစ်ခင် အားပေးမှုရော ယောကျာ်းလေး ပရိသတ်တွေ ရဲ့ ချစ်ခင်အားပေးမှုကိုပါ အခိုင်အမာရယူထားနိုင်ခဲ့တဲ့ မော်ဒယ်လ်တစ်ယောက်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
အမိုက်စား ပုံရိပ်လေးတွေ ကို လူမှုကွန် ယက်စာမျက်နှာ ထက် တင်ပေးလေ့ ရှိတဲ့ သူမကတော့ ပရိသတ်တွေရဲ့ ချစ်ခင်အားပေးမှုကို အခိုင်အမာရယူထားနိုင်သူလေးပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ အမိုက်စားခန္ဓာကိုယ်ကောက်ကြောင်းအလှကို ပိုင်ဆိုင်ထားနိုင်ခဲ့တဲ့ သူမကတော့ ပရိသတ်တွေရဲ့ အချစ်တော်လေးဆို ရင်လည်း မမှားပါဘူး။ သူမကတော့ ယခုမှာ အလန်းစား ဖက်ရှင် လေးကြောင့် ဆွဲဆောင်မှုရှိတဲ့ အလှတရားလေးပေါ်လွင်နေပြီး အမိုက်စားပိုစ့်လေးတွေပေးနေခဲ့ပါတယ်။
သူမရဲ့ အသည်းယားစရာ ပုံစံလေးနဲ့ လှပနေတဲ့ ပုံရိပ်လေးတွေ ဟာ ပရိသတ်တွေကို အချစ်တွေပိုစေခဲ့တာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ချစ်ပရိသတ်တွေအတွက် မော်ဒယ်လ်နန်းမွေစံရဲ့ အမိုက်စားပုံစံလေးနဲ့ ကြွေလောက် စရာကောင်းလွန်းတဲ့ ပုံရိပ်လေးတွေကို ပြန်လည်ဖော်ပြပေးလိုက်ပြီး အဆိုပါပုံရိပ်လေးတွေကို အောက်မှာကြည့်နိုင် ပါတယ်။
ညို့အားပြင်းတဲ့ အလှတရားတွေ နဲ့ ပုရိသတွေ ကို ရင်ခုန်သံတွေ မြန်အောင် ဖမ်းစားလိုက်ပြန်တဲ့ သဇင်ဦး
အမိုက်စား ဖက်ရှင်လေး နဲ့ ပုရိသ တွေ ရဲ့ရင် ကို ဆွဲဆောင် ညို့ယူ ထား တဲ့ “သဇင်ဦး”